Samihafa – fanilo
Mpivarotra eo amina��ny Pavillon Analakely: Tsy manaiky ny hikitihana Vakoka fa mitaky ny hanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana
SendikA�na��ny tatsambo: Mifampiampanga ho mpisoloky
Efa ho 2 taona izao no tena namaivay ny fifandonana teo amin'ireo milaza azy ho tatsambo mpikambana eo anivon'ny sendikan'ny tantsambo eto Madagasikara na ny Sygmma. Mifampiapanga ho mpisoloky ireo mpiara-dia amin'ny "sekretera jeneraly" iray, Lucien Rabeharinony, sy ny mpiara-dia amin'ny "sekretera jeneraly" hafa, Basola Nomenjanahary.
Fanapoizinana ara-tsakafo :Olona 5 indray maty, 15 nampidirina hopitaly tany Antsiranana
Nisehoana fanapoizinana ara-tsakafo indray tany Antsiranana nanomboka ny alakamisy teo, hatramina��ny farany herinandro lasa iny. Olona dimy no fantatra fa maty vokatry ny fihinanana trondro saridinina, raha 15 kosa, ireo nampidirina hopitaly. Nidina nandroaka ireo trondro mbola namidy ny mpitandro filaminanaa��
Hopitaly Ambohimiandra sy Andohatapenaka : Nahazo trano a�?Maman Kangouroua�?
Fotodrafitrasa tena ilaina��ny ireo zaza tsy ampy lanja na tsy tonga volana ny foibe a�?Maman kangouroua�?. Nisitraka izany ny hopitaly tetsy Andohatapenaka sy Ambohimiandra. Angady nanana sy vy nahitana ny Orange solidaritA� Madagascar sy ny fikambanana Compassion Madagascara��
Ady amina��ny herisetra: Tsy ny 25 novambra hatramina��ny 10 desambra ihany
Tsy ny 25 novambra hatramina��ny 10 desambra ihany, izay andro iraisam-pirenena natao hiadiana amina��ny herisetra no tokony hanaovana hetsika hiadiana amina��izany, hoy ry zareo avy eo anivona��ny rafitra tsy miankina C for C, izay fikambanana iray miady amina��izany amina��ny alalana��ilay tetikasa Sahala, fa tokony tsy hatsahatra intsony izany ady izany. Nosokafana��ity fikambanana ity niaraka tamina��ny Save Madagascar, tetsy amina��ny fokontanina��i Besarety tamina��ny marainana��ity alakamisy 30 novambra ity moa ny fanombohana ny hetsika a�?Thursdays in blacka�? na alakamisy mainty eto Madagasikara.
Varotra hanimasaka : Mila manana fahazoan-dalana vao afa-mivarotra
Nanokana andro ho fampirantiana ny sakafo ara-pahasalamana teny amina��ny Lapana��ny kolontsaina sy ny fanatajahantena ny avy ao amina��ny Minisiterana��ny Fahasalam-bahoaka, ny zoma 17 novambra teo.
Tsy fandriampahalemana : Lasa fahazarana eto Madagasikara ny fitsaram-bahoaka
Leo ny tsimatimanota ny vahoaka ka rehefa mahatratra jiolahy izy ireo, ny fitsaram-bahoaka no hitany fa vahaolana. Ahitana izany avokoa ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Tsy araka ny lalA�na anefa izany no fanitsakitsahana ny zona�� olombelona.
Fivoriana��ny OMC any Arzantina : Nampandraisina anjara hanolotra ny tetikasany ny sehatra tsy miankina
Hotanterahina any Arzantina, ny tapaky ny volana desambra izao, ny fivoriambe ho ana��ireo Firenena mivondrona ao anatina��ny OMC na ny Organisation Mondiale du Commerce. Hisy ny fanamafisana ny fifandraisana��ireo firenena samy mpikambanaa��
Vidim-bary midangana: Tsy avy amina��ireo mpamongady
Miteraka olana ny fidangan'ny vidim-bary amin'izao fotoana. Na dia ireo sompitry ny vary eto Madagasikara toa ana��i Tsiroanomandidy sy Marovoay ary Ambatondrazaka aza, raha ny nambarana��ny mpamongady iray etsy Nosy be, mbola manafatra vary eny amina��ireo seranan-tsambo ankehitriny...
BNI Madagascar: Mitohy ny tolotra ho ana��ny mpiasam-panjakana
Toy izay efa notontosainy niaraka tamina��ny avy eo anivona��ny zandarimariam-pirenena sy ny minisiterana��ny fahasalamana dia nanavao ny fifanaraham-piaraha-miombona��antony tamina��ny minisiterana��ny varotra sy ny fanjifana indray ny avy eo anivona��ny banky BNI Madagascar tamina��ny marainana��ity alarobia 22 novambra 2017 ity.
Teratany sinoa roa lahy : Nitondra pasipaoro sandoka
Marobe ireo teratany vahiny tsy ara-dalA�na mivezivezy manerana ny Faritra maro eto Madagasikara. Teratany sinoa roa indray no tra-tehaky ny zandary fa tsy manana taratasy ara-dalA�na mipetraka eto Madagasikara...
Fiainam-piarahamonina : Teratany vahiny hafahafa hita manerana ny Renivohitra
Miteraka ahiahy eny anivona��ny fiarahamonina ny fisiana teratany vahiny tonga eto Madagasikara. Mitaky fandraisana andraikitra ho ana��ny tsirairay izany, raha tiana hisiana��ny fitoniana eto amina��ny Firenenaa��
Hetsika a�?Lay tsena B: hanandratra avo ny kalitao malagasy
Ny 8 ka hatramina��ny 10 desambra izao dia ho tontosaina etsy amina��ny tanA�na Voara Andohatapenaka ny hetsika antsoina hoe a�?Lay tsena B. Varotra fampirantiana goavana izay handraisana tranoheva miisa 300 anjara. Tanjona ao anatina��ny hetsika, raha ny nambarana��ny mpikarakara, ny hametraka ny antsoina hoe Label kalitao Madagascar. Ny hametraka ny kalitaona��ny vita Malagasy amina��ny toerany sy ny hanandratra avo izany, eo amina��ny lafiny rehetra araka izany no tanjony. Isana��ny ho hita eny an-toerana ny resaka fiara sy moto, ny filatroana ary ny asa tanana.
Ady amina��ny Pesta: Samy manana ny paikadiny ireo boriborintany eto Antananarivo
Miisa efatra hatreto ireo efa namoy ny ainy tao amina��ny boriborintany faha-3, araka ny fanazavana��ny delege ao an-toerana, Andriamamonjisoa. Fepetra noraisina, noho izany, ny fanadiovana isam-bolana ny isam-pokontany ary hotohizina amina��ny taona 2018 izany, hoy ny fanazavany.